Uyifaka njani i-Android 1.6 okanye unikele nge-Htc G1 | I-Androidsis
antocara | | i-ROM, Tutorials, Iinguqulelo ze-Android
Ngale ntsasa iindaba zaqhekeka, Android 1.6 Ndandi semthethweni ngenxa Iitheminali zeADP1 kunye ne UGoogle Io2009. Ezi ndawo zezixhobo Uphando waqala ukuthengisa wakuba usunguliwe Android kwindaba ye ADP1 kwaye imizuzwana yanikwa nguGoogle kwabanye ababekho ekugqibeleni umsitho ogama Io2009. Ezi roms ziyafumaneka Android 1.6 ekuqaleni bezenzelwe kuphela iiterminal, kuyo yonke imva kwemini bekukho abantu abazama ukuyifaka kwi Umlingo weHtc ( Ngqamaniso) kwaye iyasebenza nayo, kodwa ufakelo ayisiyo yokuba yayinzima kakhulu kodwa yayifuna imiyalelo nge-adb. Kungenzeka njani ukuba amakhwenkwe e xdadevelopers Sele zilungisiwe iirom kunye nohlaziyo Android 1.6 o walifaka phantse kuzo zonke iitheminali, namhlanje lixesha lokuba uchaze i IHtc G1.
Into yokuqala yokuyithetha kukuba njengoko oku ingekuko ukuvuselelwa ngokusesikweni kwesi sigxina, emva koko ukuze ufake le rom kufuneka ube nokufikelela kwengcambu. Ukusukela Inkqubo ye-androidsis Asinaxanduva lomonakalo onokubangelwa sisixhobo (kodwa akukho nto kufuneka yenzeke nayo).
Nje ukuba oku kucacisiwe, sikhuphela i-rom ebuzwayo apha. Nje ukuba sikhutshelwe, siyikopisha kwi-Sd kwaye siyinike igama elitsha njenge-apdate.zip. Siyicima ifowuni kwaye siyivule kwimowudi yokubuyisela (EKHAYA + Vuliwe), ndiza kwenza i-backup ngoku xa kunokwenzeka ukuba iimpukane, emva koko senze Sula emva koko kufuneka sifakele uhlaziyo kuphela. Njengoko ubona, ngokufanayo nayo nayiphi na i-rom. Inginike ingxaki encinci kwaye xa iileta ze-android zisuswe ngelixa kuqalwa, yahlala imnyama kwaye kwakungekho ndlela yokuqhubeka, ukuba kwenzeka okufanayo kuwe, ungothuki, kuya kufuneka ufomathe ulwahlulo lwe-EXT2 kwaye uqale ngaphezulu.
Ngale rom sinayo walifaka, ukufikelela kweengcambu, i-A2sd, ikhomputha enikwe amandla kunye ne-IME.
Sibona onke amathandabuzo, iingxaki kunye neengcebiso kwiforum. Enkosi
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » i-ROM » INDLELA YOKUFAKA I-ANDROID 1.6 OKANYE I-DONUT KWI-HTC G1
Izimvo ezi-23, shiya ezakho
Molo, sele ndikhuphele i-rom, kodwa icandelo lokugqibela alisebenzi kakuhle. Ngaba uthetha ukuba emva kokufaka uhlaziyo isikrini sinokuhamba simnyama xa siqala? Ukuba kunjalo, ndilufomatha njani ulwahlulo lwe-EXT2?
Ewe ndigqibile ukwenza onke amanyathelo kwaye xa ndiqala okokuqala isikrini simnyama kwaye asilayishanga. Ukufomatha, ucima ifowuni, ukhuphe ikhadi kwaye uqhagamshele kwikhompyuter kunye nefomathi ngendlela efanayo naleyo ubusenza ngayo ngaphambili Ukuba uyafuna, yenza ikopi yeefolda onazo kwi-ext2 nasemva kokufomatha kwaye uqale kakuhle kwifowuni, uzikopa kwakhona kwi-ext2 kwaye sele unezicelo ozifakile ngaphambili.
Ndiyifakile i-rom kwaye ihamba kakuhle kakhulu. Ingxaki ekuphela kwayo endinayo yikhamera kunye nenkqubo ethile ethi imemori khadi ayibhaleki.
Ndifomathile, ndalitshintsha ikhadi ukuze ndifake enye, kodwa ayisebenzi.
I-Opsss, kwenzeka kum ukuba indixelele ukuba kufuneka ndiyisebenzise i-Sd ukuze ndikwazi ukuyisebenzisa. Kuya kufuneka siphande
Ndiyabulela ngokucacisa loo ngongoma kum, ngendlela, ngaba unayo ingxaki eyayinayo i-bellkhaire?
Ndilifomathile ikhadi, ndalitshintshela elinye. Yenza izahlulelo + usule + ufake kwaye iyaqhubeka nokuwa.
IParami ekufuneka isilele kwirom.
Ekugqibeleni kuye kwafuneka ndifake ingxelo entsha ye-rom version 2 kwaye yonke into isebenza ngokuchanekileyo.
Luphi unxibelelwano lokutshintsha?
Inguqulelo yesi-2? Uyithathaphi ke leyo?
Kulungile Ndiyabonga. Ikhonkco litshintshele kwinguqulelo entsha
Ngaba kukho isifundo seHero okanye siyafana noMlingo? Ngaba kukho umntu owake wazama iqhawe?
Ayisiyoyomzuzu weHero, kodwa ngokuqinisekileyo ayizukuthatha thuba lide
I-DAI Phakathi sitsho
Inqaku elilunge kakhulu, enkosi.
Phendula kwiDAI Media
Molo, ndihlaziyile, ndiye ndasula ngaphambili kwaye ngokuchanekileyo izicelo esele zifakiwe "bezilahlekile". Inyani yile yokuba emva kokuyila kwakhona i-APN kunye nokubeka igama lomsebenzisi le-gmail yam. Andazi ukuba emva kokukhangela kwiMarike ndabona uluhlu lwezicelo ebendinazo (ezinye sele zihlawulelwe) ekufuneka zibekhona ekhadini, ndiye ndaphinda ndafaka ezimbalwa ndaza ndazishiya ezinye ngenxa yokungabikho kwexesha. Inyani yile yokuba ngoku andazi ukuba ndingaya kanjani kolo luhlu, yaphuma kunye ne icon yayo nayo yonke into
Kwicandelo lokukhuphela kwimarike, zama apho
UJohn alexos sitsho
Molo, ndinayo i-G1, kwaye ndifuna ukuhlaziya ingxelo ye-OS. (HERO), kodwa ndinemibuzo ilandelayo
I-G1 yam ivuliwe, ngexesha lokuhlaziya iHero OS, ngaba iphulukene nokusebenza? Ngaba ifowuni yam ingaphinda itshixwe?
UKUBA uhlaziyo alusebenzi kum, yeyiphi inkqubo efanelekileyo yokwenza ukubuyela umva?
Phendula kuJohn Alexos
Uthetha ukuthini xa usithi liqhawe?
Uxolo, mhlawumbi andiyichazanga kakuhle, inento yokwenza nokufaka i-HTC Hero rom kwi-G1 yam, ukuba ndiyayifaka, ndingaphulukana nokuvula?
Kwaye ngokunxulumene nazo, ukuba zilungiselelwe ngokungalunganga, ndingabuyela njani emva? okanye akukho kubuya?
Andazi ukuba ndikuqonda kakuhle na. Ngaba uyafuna ukufaka i-htc hero rom kwi-G1? Yeyiphi irom ofuna ukuyifaka ngokukodwa?
Molo, ndifuna uncedo lwakho nceda, ndibuyisele i-g1 yam kwaye ngoku ayifuni ukuvula i-wi fi application, okanye i-bluethoot, ukuba umntu unokundinceda, izimvo zakho ziyaxatyiswa kakhulu, imibuliso kunye nombulelo
UVictorino 38 sitsho
indala ndifuna ukuba nezahlulelo kwi-sd yam ukufaka idonut
Phendula UVictorino 38